Warbixin ku saabsan booqashadii Wasiirka gaashaandhigga uu ku tegay magaalada Jowhar + Sawirro
Wasiirka Gaashaandhigga Dowladda Federaalka Soomaaliya C/Xakiim Xaaji Maxamuud Fiqi oo shalay booqasho ku tegay magaalada Jowhar ee gobolka Sh/dhexe ayaa ka warbixiyay socdaalkiisa iyo qorshaha Dowladdu ka damacsan tahay magaaladaasi oo in muddo ah uu gacanta ku hayay ururka Al-Shabaab.
Wasiirka gaashaandhigga waxa uu sheegay in magaalada Jowhar ay dib ugu soo celinayaan amniga iyo kala dambeynta, wuxuuna caddeeyay in magaalada ay la wareegayaan ciidamada nabad sugidda iyo ciidamo Boolis ah si loo sugo nabadgelyada magaalada Jowhar iyo degaanada la xariira.
Md. /Xakiim Xaaji oo ay la socdeen saraakiisha ciidamada Dowladad iyo kuwa AMISOM, Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Eng. Cabdi Jiinow Calasow iyo madax kale ayaa markii ay tageen magaalada Jowhar waxay kulamo kala duwan la yeesheen qeybaha bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar.
Odayaal, waxgarad, culumaa'udiin, dhallinyaro, haween iyo dadweyne fara badan ayaa Wasiirka iyo xubnihii la socday ku soo dhoweeyay magaalada Jowhar, wuxuuna Wasiirka booqday xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Jowhar, gaar ahaan xarumaha Dowladda iyo goobaha danta guud, isagoo markaas kaddib tegay goob loo sii diyaariyay.
Odayaasha iyo waxgaradka magaalada Jowhar ayaa ka dalbaday Wasiirka Gaashaandhigga Dowladda bacdamaa gobolka Sh/dhexe uu ka dhacay isbedel, isla markaana maamulkii hore ee Al-Shabaab meesha laga saaray oo Dowladda ay la wareegtay inay hanato maamulka iyo amniga magaalada Jowhar iyo degmooyinka kale ee ka tirsan gobolka Sh/dhexe.
Wasiirka Gaashaandhigga ayaa warbixino kala duwan ka dhageystay odayaasha magaalada Jowhar, isagoona markaas kaddib u ballanqaaday in Dowladdu ay qorsheyneyso sidii ay dadka gobolka ku dhaqan uga haqab tiri lahayd baahiyaha kala duwan ee la xariira danahooda iyo maamulka dowliga ah.
"Ammaanka magaalada Jowhar degmo kasta oo laga xoreeyo kooxaha nabad-diidka ah waxaa la geynayaa ciidamo isugu jira nabad sugid iyo Boolis, waxaana dadka degan Jowhar gobolka Sh/dhexe inay la shaqeeyaan maamulka iyo ciidamada nabadgelyada" ayuu yiri C/Xakiim Xaaji Maxamuud Fiqi.
Dhinaca kale Wasiirka ayaa sheegay in kooxaha ururka Al-Shabaab ee weli ku sugan degmoyinka kale ee gobolka Sh/dhexe laga cirib tirayo, isla markaana aan laga hari doonin inta ay ku sugan yihiin taako ka mid ah dhulka Soomaaliya, wuxuuna tilmaamay Wasiirku in dowladda ay dadaal ugu jirto sidii ay dalka awoodiisa ula wareegi lahayd.